Qingdao JINBEI Machinery Co., Ltd. (obizwa nangokuthi Qingdao JBD Machinery Co., Ltd) kuyinto corporation esibanzi zokuhlanganisa ucwaningo lwesayensi nokuthuthuka, izimboni, amapulazi akhiqiza innovation (kokubonisana), nokukhangiswa. Siyilungise ku ukuthuthukiswa "ulinde izinga, ukuthuthukisa kobuchwepheshe, amasiko lokuqala" selokhu kwasekelwa inkampani. Inkampani yethu kuveza edolobheni elihle Qingdao, Shandong sifundazwe, China.The traffic elula nezindawo ezinhle isifikisa .Ubuhlobo ukuthuthukiswa. Ngokusekelwa enkulu amakhasimende amaningi nabangane, inkampani yethu eba ngokushesha futhi uye kwakheka inkampani iqembu nge ucwaningo lwesayensi, ukukhiqiza, ezohwebo kanye kungasebenzi.
Ukunwetshwa ibhizinisi emakethe
Ukudalwa okuqanjwa kabusha njalo umoya core isiko JINBEI sika. Kusukela kwamiswa JINBEI, siqhubeka endleleni mission energy green. Asazi njalo singaphoqi izinga okusezingeni eliphezulu, imfucuza ongaphakeme nokungcoliswa ongaphakeme.
Ukuqamba Technical Consultancy
Thina ninikeza kuxhunyanwa mayelana nalezi zidingo ezilandelayo.
umxhumanisi Technical ukuqalisa entsha isitshalo / iphrojekthi
umxhumanisi Technical nokusekela ukwethulwa isitshalo & imishini nokubeka yimpumelelo
Consulting yezobuchwepheshe ukuze intuthuko entsha umkhiqizo
Nikeza Training Technical
Qedela umsebenzi ezintathu ukuhlolwa ntathu plant & umshini ukwehlisa ukukhiqizwa izindleko
Singabantu ukukhetha okokuqala nokubaluleke kakhulu amaklayenti ahlukahlukene ezilandelayo izizathu:
ukusatshalaliswa Wide nokuhwebelana inethiwekhi
Enkulukazi ekwenziweni experiance
Engeza: No.15 Guangdong Road, Beiguan zezimboni Park, Jiaozhou City, Qingdao, China
Thumela coad: 266300